HomeANKAPOBENYJobsTÜBİTAK dia handray mpiasa
tubitak dia handray mpiasa
TÜBİTAK dia handray mpiasa; Lohan'ny siansa sy ny teknolojia Fikarohana Filan-kevitry ny Turkey (TUBITAK) dia namoaka dokam-barotra ho miaramila vaovao mpiasa. Ao amin'ny faritanin'i Kocaeli, ireo mpiasa nahazo mari-pahaizana diplaoma no halaina.
TÜBİTAK namoaka fanambarana vaovao hatramin'ny Desambra. Araka ny fanambarana navoaka tao amin'ny faritany Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 2 dia hividy mpiasa tsy misy banga intsony. Ireo mpiadina dia tsy maintsy manana ny fepetra takiana alohan'ny ahafahana mampihatra.
Torkia siansa sy ny teknolojia Fikarohana Institution biis sy Information Security Advanced Technologies nanomboka ny dingana fampiharana ny fandraisana mpiasa Research Center. Ireo mpifaninana dia takiana amin'ny fametrahana ny fangatahan'izy ireo amin'ny 27 Desambra 2019 amin'ny farany. Ny takelaka apetraky ny tranonkala ofisialin'i T ,BİTAK dia ny Application Application Job (kariyer.sage.tubitak.gov.t dia) Izany no tanterahina.
a) Hikasa amin'ny dokam-barotra İlanwww.bilgem.tubitak.gov.t dia”Mila misoratra anarana amin'ny rafi-pampianarana asa ianao. (Rehefa mamorona CV ho an'ny fangatahana, ny antontan-taratasy ilaina rehetra dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny rafitry ny eletronika ary tsy maintsy apetraka amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny kaonty fitadiavana azy io. Afa-tsy ny fampiharana amin'ny alàlan'ny Rafitra Application Job
tsy ekena ny fampiharana.
b) Ny fampiharana dia tsy maintsy apetraka tsy mihoatra ny 27 / 12 / 2019: 17: 00.
c) Hodinihina amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana ny dokambarotra ny fampiharana. Ireo mpifaninana dia ho afaka hampihatra amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny kaody momba ny loharanom-pahalalana avy amin'ny rafi-pampianarana asa. Tsy tokony hodinihina ireo fangatahana tsy misafidy paositra.
d) Ny dinidinika amin'ny mpifaninana dia antsoina hoe marobe 10 amin'ny isan'ireo olona noforonina manomboka amin'ny isa ambony indrindra arakaraka ny fizarana (e) ny fizarana ankapobeny Koşullar ho hitadiavana mpifaninana. Araka ny fizarana (f) amin'ny Fizarana ankapobeny Koşullar hojerena ho Kandida p, eo amin'ireo kandida manana mari-pahaizana PhD ao amin'ny saha,
Ankoatr'izay, ny fotoana 10 dia raisina amina dinidinika amin'ny dinidinika. Raha misy kandida hafa manana isa mitovy amin'ny kandidà farany dia asaina atao dinidinika ihany koa izy ireo.
e) Andininy (e) ny fepetra ankapobeny Koşullar hojerena ho an'ny Kandida, ho an'ireo kandidà izay nahavita ny fianarany diplaoma any ivelany, ary (e) sy (f) ny "Fepetra ankapobeny hikaroka ireo kandidà Doktora dia tsy takiana amin'ireo mpangataka nahavita ny fianarany diplaoma any ivelany; ho tombanana ihany koa ny kandidà.
f) Ny mpifaninana dia hodinihina araka ny fanambarany efa niditra tao amin'ny rafitry ny fangatahana asa mandritra ny fangatahan'izy ireo.
Ny asa dia nanomboka tamin'ny tetik'asa iraisana an'ny TÜBİTAK sy TÜDEMSAŞ
Fivoriam-pandrosoana R & D TCDD-TÜBİTAK
TUBITAK Manosika Ny Fiarandalamby Voarakitra ao amin'ny 2023 Vision (Video)
Afyonkarahisar-Denizli-Isparta-Burdur Line famantarana famantarana
TUBITAK Fandraisana mpiasa
Istanbul Metro Mpiasa Mpanamboatra Lazao: Tsy ara-dalàna ny karama, Sakafo i Kurtlu